Sidee ayuu u dhacay dilkii Almaas Elman Cali? maxaadsa ka taqaan Qoyska caanka ah ee reer Elman? – Hornafrik Media Network
Sidee ayuu u dhacay dilkii Almaas Elman Cali? maxaadsa ka taqaan Qoyska caanka ah ee reer Elman?
By Liibaan Nuur	 On Nov 20, 2019
Si kastaba, Almaas ayaa amrkii xabadda laga soo saaray, waxay noqotay xabad ka mid ah rasaasta ciidamada Amisom, sida ay dad ku sugan Xalane ay noo xaqiijiyeen.
Hadaba aan dib u milicsanno in yar oo ka mid ah Taariikhda qoyska caanka ah reer Elman:
Sheikh Soomow oo si weyn uga soo horjeestay Muxaadiro uu Jimaha Sheikh Umal ku qabanayo Muqdisho